लगानी सम्मेलनः उद्घाटन गर्दै प्रम ओलीले भने, ‘भर्जिन ल्यान्ड नेपालमा लागनी गर्नुस्, मुनाफा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’
प्रधानमन्त्रीले जे भने
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । ४० देशका ६ सय बढी प्रतिनिधि सम्मिलित लागनी सम्मेलन राजधानी काठमाडौंस्थित होटेल सोल्टीमा सुरु भएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार लागनीकर्ताको लगानी सुरक्षा र मुनाफाको सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
उनले नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई विभिन्न परियोजनाहरुमा छानी छानी लगानी गर्न आह्वान समेत गरेका छन् ।
लगानी सम्मेलनमा आएका विदेशी तथा स्वदेशी सबै पाहुनाहरुलाई स्वागत गर्दै प्रम ओलीले आफू लगानीकर्ताका रुपमा विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्न पनि आतुर रहेको बताए ।
प्रम ओलीको दाबी छ, ‘नेपाल लगानीका लागि भर्जिन ल्यान्ड हो । यो तपाई (विदेशी लगानीकर्ता) हरुको दोस्रो घर हो । ... नेपाल व्यवसायको हब बन्ने छ । यहाँहरुको लगानी सुनिश्चित गर्नु नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व रहने छ ।’
उनले अघिल्लो वर्ष रारा तालको किनाराबाट समृद्ध नेपालको उद्घाटन गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै भने, ‘एक वर्षअघि रारा तालको किनारबाट नेपालको विकासको खाका प्रस्तुत गर्दा मैले हाम्रा मित्र तथा हितैसीहरुसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएको थिएँ । आज यो सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रण स्वीकार गरेर महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी आउनुभएका मित्रहरुलाई देख्दा निकै खुसी लागेको छ, हामी उत्साही बनेका छौं ।’
समृद्ध नेपाल कल्पना मात्र हैन
प्रम ओलीले विशेष सम्बोधन गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा कल्पना नभएर पूरा गर्न सकिने कार्यक्रम नै रहेको बताएका छन् ।
लगानी सुरुक्षाबारे संकेत गर्दै प्रम ओलीले नेपालमा हिंसाको कुनै स्थान नै नरहेको समेत जिकिर गरेका छन् । शान्ति र सुव्यवस्था खलल पुराउने जोकोहीलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रम ओलीले नेपालमा लगानीकर्ताहरुले पहिलेझैं कानुनी र नीतिगत अल्झन नरहेको समेत दाबी गरेका छन् । उनले भने, प्रम ओलीले नेपालमा लगानीकर्ताहरुले पहिलेझैं कानुनी र नीतिगत अल्झन नरहेको समेत दाबी गरेका छन् ।
यो सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रण स्वीकार गरेर सहभागी आउनुभएका मित्रहरुलाई देख्दा निकै खुसी लागेको छ, हामी उत्साही बनेका छौं
उनले भने, ‘मुलुकको आजको दायित्व आर्थिक समृद्धिको हो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि समृद्धि चाहिन्छ । आज सरकार स्थिर छ र लगानी मैत्री नीतिहरु तय भएका छन् ।’
प्रम ओलीले अघि भने, प्रम ओलीले अघि भने, ‘हाम्रो तत्कालीन लक्ष्य भनेको कम विकसित मुलुकको तहभन्दा माथि उठ्ने, मध्यकालिन लक्ष्य भनेको मध्य–आय भएको मुलुकको स्थितिमा पुग्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हो ।’
त्यसका लागि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रम ओलीले राष्ट्रिय योजनाको आयोगको तथ्यांक उद्धृत गर्दै आउने ५ वर्षमा नेपालका लागि ८८.१८ बिलियन डलर लागनी आवश्यक रहेको बताए ।
प्रम ओलीले ‘यो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सबैलाई सहयोग गर्न म आग्रह गर्दछु, भने ।
लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रम ओलीले नेपालको जनसंख्या करिब ५७ प्रतिशत जनता काम गर्न सक्ने उमेर समूहको रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको कामदारको लागत सस्तो भएको पनि बताए ।
प्रम ओलीले नेपाल लागनीका लागि जोखिममुक्त क्षेत्र रहेको समेत बताएका छन् ।
४० देशका ६ सय भन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी रहेको सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी समेत गरी एक हजार लागनीकर्ताहरु सहभागी छन् ।
सरकारका तर्फबाट सम्मेलनमा लगानी बोर्डले तयार पारेको ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा सहरी पूर्वाधार विकास तथा पूर्वाधार लगायत ५० तथा नेपालको नीजी क्षेत्रले तयार गरेको २७ गरी ७७ वटा विषयगत परियोजनाहरु प्रस्तुत गरिने छ ।
नेपालमा विदेशी लगानी भित्राउने उद्देश्यले लगानी सम्मेलन गरिएको हो ।
लगानी सम्मेलनको कुम्भ मेलामा मुलुकः यसरी हुँदै छ उद्घाटन आज, कस्ता छन् आजका कार्यक्रम ?
के के छन् प्राथमिकतामा ? कति छन् सहभागी ?